Wararkii ugu dambeeyey ee Jiida dagaalka Tukaraq & Xiisada Laascaanood …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyey ee Jiida dagaalka Tukaraq & Xiisada Laascaanood ….
Wararkii ugu dambeeyey ee Jiida dagaalka Tukaraq & Xiisada Laascaanood ….
Wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya jiidaha ay isku horfadhiyaan ciidamada labada maamul ee Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in ay wali taagan tahay xiisadda colaadeed, taas oo ay labada dhinacba si xawli ah wali ku wadaan dadaalada ku aadan arrimaha dagaalka.
Inkastoo aysan jirin wax rasaas ah oo laga maqlayo aagagaas tan iyo wixii ka dambeeyey Axadii lasoo dhaafay, haddana cabsi ayaa laga qabaa dagaal culus oo labada kooxoodba dhexmara.Gaadiidka dagaalka iyo ciidamo cusub ayaa lagu daabulayaa goobahan, waxaana muuqata in labada maamul ay u diyaar garoobayan wali dagaal buuxa oo ku aadan gacan ku heynta gobalka Sool.
Maleeshiyaad u dhashay deegaankaas ayaa xooga saaraya sidii ay u qabsan lahaayeen deegaanadooda, kuwaas oo iskaga yimid inta badan deegaanada gobalkaas, waxayna kala taabacsan yihiin labada maamul.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay jireen dadaalo gaabis ah oo ay wadeen wakiilada caalamiga ah, kaas oo yoolka laga leeyahay ay tahay in lasoo afjaro xiisadahan, laguna bedelo xal iyo wada hadal rasmi ah.
Isimada deegaanadaas ka soo jeeda qaarkood ayaa qeyb ka ah abaabulka ka socda dhinaca Puntland, waxayna cadaadis xoog badan kuhayaan Madaxda Puntland si ay u qaadaan duulaan dib loogu qabsanayo goobaha ay gobalka Sool ka maamusho Somaliland.